သစ်နွေရေးသားပြီး နွေဦးလင်းအိမ် ခံစားရွတ်ဆို တင်ဆက်တဲ့ “အငြှိုးနဲ့ လူသတ်နေ” နိုင်… – PVTV Myanmar
သစ်နွေရေးသားပြီး နွေဦးလင်းအိမ် ခံစားရွတ်ဆို တင်ဆက်တဲ့ “အငြှိုးနဲ့ လူသတ်နေ” နိုင်…
·6months ago ·16 Comments
သစ်နွေရေးသားပြီး နွေဦးလင်းအိမ် ခံစားရွတ်ဆို တင်ဆက်တဲ့ “အငြှိုးနဲ့ လူသတ်နေ” နိုင်ငံရေးအတွေးအမြင်ဆောင်းပါးကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 3.2K Share – 443
2021-07-16 at 7:53 PM
ကမၻာျကီးကသည္တိုင္းျကည္႕မေနဘူးဆိုတာသိေပမဲ႕ ဒါေတြေျပာသြားတာအမွန္တရားေတြပါ ေျမျပင္မာ ရက္စက္ယုတ္မာမႈကသည္ထက္ပိုပါတယ္ ျမန္မာျပည္ကို ကမၻာ ကအျမန္ကူညီေပးျကပါလို႕ေမတၲာရပ္ခံပါတယ္ရွင္
2021-07-16 at 8:06 PM
Oo Chit Chit says:
2021-07-16 at 8:34 PM
2021-07-16 at 8:38 PM
2021-07-16 at 8:39 PM
2021-07-16 at 8:54 PM
2021-07-16 at 9:06 PM
2021-07-16 at 9:43 PM
Min Swe Oo says:
2021-07-17 at 7:51 AM
2021-07-17 at 3:54 PM
Fighting! ! !
2021-07-17 at 3:55 PM
Freedom to Daw Aung San Suu Kyi.
2021-07-17 at 8:35 PM
2021-07-17 at 8:39 PM
2021-07-31 at 12:22 AM
ဒီအစီအစဥ္ကိုမင္းေအါင္လိဳွင္ျကည္မွာပါ မင္းေအါင္လိွဳင္နဲ႕အဖြဲ႕သါလူဆိုရင္ ရွက္ေသေလါက္တယ္
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေ တစ်နည်းအားဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသုံ…